यस्ता लक्षण देखिए मृगौलामा समस्या हुनसक्छ, के गर्ने ? - Yohosamachar
May 3, 2020 May 13, 2020 योहो समाचार	0 Comments
जब मृगौलाको कार्यक्षमता कम हुन्छ वा फेल हुन्छ, शरीरमा रहेको विषाक्त रासायनिक पदार्थ, तरल पदार्थ आदि बाहिर निस्कन पाउँदैन ।
– मृगौलामा समस्या हुँदा पिसाबको मात्रा र पिसाब हुने समयमा परिवर्तन हुन्छ ।
– पिसाबको मात्रा अचनाक कम हुन्छ वा बढ्छ ।
– पिसाबको रंग वाढा हुन्छ ।
– पटक पटक पिसाब आएको महसुष हुन्छ तर, पिसाब आउँदैन ।
– पिसाब गरेको समेमा दुख्छ ।
– पिसाबका रगत देखिन्छ ।
– हात, खुट्टा, अनुहार सुन्निछ ।
– अत्याधिक शारीरिक थकावट तथा कमजोरी महसुष हुन्छ ।
– चिडचिडापन आउँछ । कुनैपनि काममा एकाग्रता हुँदैन ।
– हरेक समय चिसो महसुष हुन्छ ।
– छाला चिलाउन थाल्छ ।
– मुखमा दुर्गन्ध आउँछ ।
– वान्ता हुन्छ ।
– भोक लाग्दैन ।
– सास लिन असुविधा हुन्छ ।
– हरेक समय कम्मरको भाग दुख्छ ।
२. यदि मधुमेहका रोगीले मधुमेहमा नियन्त्रण गर्न सकेन भने शरीरमा अत्याधिक ग्लुकोजको निर्माण हुन्छ । यहि ग्लुकोज जम्मा हुँदा मृगौला हुने स-साना फिल्टरमा समस्या हुन्छ । त्यही कारण मृगौलाले शरीरको विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न सक्दैन । फलत, मृगौला खराब हुनसक्छ ।
७. अत्याधिक मात्रामा नसालु पदार्थ, मदिरा आदि सेवन गर्दा पनि मृगौलाले आफ्नो काम गर्न असमर्थ हुन्छ ।
८. विभिन्न प्रकारका एन्टिबायोटिक्स गोली लिँदा मृगौलामा हानी पुग्छ ।
प्राकृतिक उपचार विधी
मृगौलालाई स्वस्थ्य राख्नका लागि सक्रिय दिनचर्या र स्वस्थ्य खानपान जरुरी हुन्छ । आर्युवेदमा दुबै मृगौला, मुत्रवाहिनी र मुत्राशय आदिलाई मूत्रवह स्रोतको नाम दिइएको छ ।
मृगौला खराब हुनबाट बच्नका लागि पीपलको पात र निमको पात निकै उपयोगी मानिन्छ । दुबैको मिश्रणलाई राम्ररी पानीमा उमालेर त्यसको रस नियमित मात्रामा पिउनुपर्छ ।
यससँगै योगले पनि फाइदा गर्छ । खासगरी कपलभाती योग नियमित रुपमा गर्नुपर्छ । अनुलोम विलोम लगायत कतिपय यस्तो योग हुन्छ, जसले मृगौला खराब हुनबाट बचाउँछ ।
अकुप्रेसर विधी पनि अपनाउन सकिन्छ । हात तथा खुट्टो कान्छी औंला वा हत्केला र खुट्टाको मध्य भागमा निरन्तर दबाउनु पर्छ ।
नुन र फस्फोरसको मात्रा कम हुनुपर्छ । पोटेशियम पनि नियन्त्रित हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा केरा फाइदाजनक मानिन्छ । यसमा कम मात्रामा प्रोटिन हुन्छ । तरल पदार्थ सीमित मात्रामा लिनुपर्छ । उसिनेको सब्जी मात्र सेवन गरौ । तारेको, भुटेको, मसलेदार खानेकुरा सेवन नगरौ ।
← मृगौला स्वस्थ राख्ने सूत्र
कलेजाे सफा पार्न खाने गर्नुहाेस् यस्ता खानेकुराहरु →
ग्यास्ट्रिक हुँदा के खाने, के नखाने?